ဒီဇင်ဘာလ 9, 2017 – 2ငါးကို
ဒီဇင်ဘာလ 9, 2017
မူလစာမျက်နှာ / ဒီဇင်ဘာလ 9, 2017
ကျဟရှောယ 30: 19- 21, 23- 26
30:19 ဇိအုန်မြို့၏လူဦးယေရုရှလင်မြို့၌အသကျရှငျပါမညျများအတွက်. ခါးခါးသီးသီး, သငျသညျငိုကွှေးလကျြမည်မဟုတ်. ကရုဏာ, သူသည်သင်တို့ကိုသနားယူလိမ့်မည်. သင့်ရဲ့အော်ဟစ်သံကိုနား, အဖြစ်မကြာမီသူနား ထောင်. အဖြစ်, သူသည်သင်တို့မှတုံ့ပြန်မည်.
30:20 ထိုအခါသခင်ဘုရားသည်သင်တို့အထူမုန့်နှင့်ရေကိုငါပေးမည်အသုံးမပြုနိုင်. ထိုမင်းသည်သင်၏ဆရာတို့သည်နောက်တဖန်သင်တို့ထံမှပျံသွားစေသမည်မဟုတ်. သင်၏မျက်စိသည်သင်၏သင်တန်းပို့ချကိုကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်.
30:21 နှင့်သင်၏နားရွက်သင့်ကျောနောက်သို့သင်သတိပေးဆုံးမတဦးတည်း၏အမိန့်တော်ကိုနားမထောငျပါမညျ: "ဒီနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်! ဒါကြောင့်၌ကျင်လည်! ထိုအလွှဲပါဘူး, လက်ျာလည်းမ, မလက်ဝဲဖို့။ "
30:23 ထိုအသငျသညျမွကွေီးပျေါမှာမျိုးစေ့ကိုကြဲဘယ်နေရာကိုမဆို, မိုဃ်းရွာအမျိုးအနွယ်အားပေးတော်မူလတံ့. ထိုအခါမြေကြီးတပြင်ဘောဇဉ်ကနေပေါင်မုန့်ကိုအလွန်ပေါများခြင်းနှင့်အပြည့်အဝဖွစျလိမျ့မညျ. ထိုနေ့ခြင်းတွင်, သိုးသငယ်ကိုသင့်ရဲ့အပိုင်၏ကျယ်ဝန်းပွညျ၌ကျက်စားကြလိမ့်မည်.
30:24 နှင့်သင်၏နွားထီး, နှင့်မြေပြင်အလုပ်လုပ်သောမြည်း၏ Colt, ကောက်နယ်တလင်းပေါ် winnowed ကဲ့သို့အစေ့တစ်ဦးရောနှောစားကြလိမ့်မည်.
30:25 ထိုအရပ်၌ဖြစ်ရလိမ့်မည်, ခပ်သိမ်းသောမြတ်သောတောင်ပေါ်မှာ, ခပ်သိမ်းသောခြီးမွှောကျတောင်တော်ပေါ်မှာ, ရေကိုအပြေးမြစ်, လူအမြား၏အသေသတ်ခြင်း၏နေ့အတွက်, ရဲတိုက်လဲလိမ့်မည်သည့်အခါ.
30:26 နှင့်လ၏အရောင်သည်အလင်းနေရောင်၏အရောင်သည်အလင်းကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်, နှင့်နေရောင်၏အရောင်သည်အလင်းခုနစ်ဆလိမ့်မည်, ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတ၏အရောင်သည်အလင်းကဲ့သို့ဖြစ်, ထာဝရဘုရားသည်မိမိလူမျိုး၏ဒဏ်ရာကိုစည်းတော်မူမည်သည့်အခါတစ်နေ့တာအတွက်, သူကမိမိတို့အဘေး၏လေဖြတ်ရောဂါကိုငြိမ်းစေမည်သည့်အခါ.
မဿဲ 9: 35- 10: 1, 5- 8
10:1 နှင့်သူ၏တဆယ်နှစ်လုံးကိုတပည့်အတူတူကိုခေါ်တော်မူပြီးမှ, သူကသူတို့ကိုညစ်ညူးသောနတ်ကိုကျော်အခွင့်အာဏာကိုပေး၏, သူတို့ကိုနှင်ထုတ်ဖို့နဲ့တိုင်းအနာများနှင့်ရှိသမျှသောအားနည်းခြင်းအဖြစ်ကိုပျောက်ကင်းစေရန်.
10:5 ယရှေုသညျဤအတဆယ်နှစ်လုံးကိုစလှေတျတျော, သူတို့ကိုညွှန်ကြားချက်, ဟုဆို: "သာသနာပလူတို့လမ်းဖြင့်သွားလာမနေပါနဲ့, နှင့်ရှမာရိမွို့သို့မဝင်နိုင်ပါဘူး,
10:7 ထိုအထွက်, တရားဟောပွော, ဟုဆို: '' ကောင်းကင်ဘုံ၏နိုင်ငံတော်သည်လုနီးပြီဟုဆို၏။
10:8 မကျန်းမမာကိုပျောက်ကင်းစေ, သေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်စေ, နူဖြေရှင်းမည်, နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်. သငျသညျလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခံရကြပြီ, ဒါကြောင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးမည်.
ဒီဇင်ဘာလ 8, 2017
ဒီဇင်ဘာလ 10, 2017